Football Khabar » खेलाडीको चोटले जिदानलाई ‘नो टेन्सन’, बार्सिलोनालाई यस्तो ‘डाइलग’ !
खेलाडीको चोटले जिदानलाई ‘नो टेन्सन’, बार्सिलोनालाई यस्तो ‘डाइलग’ !
जारी सिजन स्पेनिस सुपर कप फुटबलअन्तर्गत आज रातिबाट सेमिफाइनलका खेल हुँदैछन् । पहिलो सेमिफाइनलमा रियल मड्रिड र भ्यालेन्सिया आमनेसामने हुँदैछन् । अर्को खेल भोलि बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडबीच हुनेछ ।
आफ्नो खेलअघि रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले प्रतियोगिता र उपाधिबारे बताएका छन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलन बोल्दै जिदानले आफूहरूको लक्ष्य उपाधि रहेको बताए । उनले सेमिफाइनलका ४ वटै टिम उपाधि जित्न योग्य भए पनि यो सिजन आफूहरूको हुने भन्दै जिदानले अन्य टिमलाई चुनौती दिए ।
‘हामी यहाँ प्रशिक्षण गर्न र खेल्न मात्रै आएका छैनौं, जाँदा उपाधि लिएर जानेछौं,’ जिदानले भने, ‘हामी यो सिजनको पहिलो प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा गुमाउने छैनौं । म र मेरो टिम यसका लागि तयार छ ।’
सुपर कप खेल्ने टोलीमा रियलका ३ जना प्रमुख खेलाडी छैनन् । इडेन हाजार्ड, करिम बेन्जेमा र ग्यारेथ बेल ३ जनै चोटले टोलीबाहिर छन् । ३ जना प्रमुख खेलाडीबिना रियललाई उपाधि होडमा कठिन पर्ने पक्का छ । तर, जिदान भने त्यो मान्दैनन् । उनले केही खेलाडी चोटले टिममा नरहे पनि आफूसँग खेल । उपाधि जित्न एकसे एक खेलाडी रहेको बताए ।
‘यहाँ हामीसँग इडेन, ग्यारेथ र करिम ३ जनै छैनन् । अरूका लागि टिमको मुख्य आक्रमणपंक्ति नै छैन । तर, मलाई चिन्ता छैन,’ जिदानले भने, ‘मसँग अरू एकसे एक खेलाडी छन् । खेल र उपाधि जित्न उनीहरू तयार छन् । म ढुक्क छु, मेरो टिममा यो समय युवा खेलाडीको हो ।’
टिमका प्रमुख अनुभवी खेलाडी नहुँदा जिदानसँग सुपर कप खेल्न युवा खेलाडी भिनिसियस जुनियर, रोड्रिगो, लुका जोभिक उपलब्ध छन् । त्यस्तै, लुकास भासक्वेज र डियाज मारिआनो पनि टोलीमा फर्किएका छन् । त्यस्तै, ब्राहिम डियाज पनि टोलीमा छन् । यता, मिडफिल्डरमा अनुभवी खेलाडी इस्को, लुका मोड्रिक, कासेमिरो, टोनी क्रुस ठीकठाक छँदैछन भने पछिल्लो समय उत्कृष्ट स्तरमा रहेका फेडे भाल्भर्डे पनि तयार छन् । लामो समयदेखि चोटग्रस्त रहेका हामेस रोड्रिग्वेज पनि टोलीमा फर्किएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिदानले आफूहरू भ्यालेन्सियालाई हराएर फाइनल पुग्नेमा ढुक्क रहेको बताए । ‘भ्यालेन्सिया बलियो टिम हो । तर, हामी उनीहरूलाई हराउन तयार छौं । हामी फाइनल पुग्छौं,’ जिदानले भने ।
जिदानले फाइनलमा आफूहरूसँग जो परे पनि फरक नपर्ने बताए । ‘फाइनल ? जो भए पनि तयार,’ जिदानले भने, ‘यदि तपाईं बार्सिलोनाको कुरा गरिरहनुभएको छ भने अवश्य पनि, फाइनलमा क्लासिको हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ । तर, बार्सिलोनासँग फाइनल भए त्यो हाम्रा लागि रोमाञ्चक र विशेष हुनेछ ।’
प्रकाशित मिति २३ पुष २०७६, बुधबार १८:४७